Summer Sounds, fanangonana fetiben'ny Springfield | Bezzia
Maria vazquez | 11/05/2022 18:00 | Inona no hotafiko
Mandeha any amin'ny iray amin'ireo fetin'ny mozika izay hatao amin'ny fahavaratra eto amintsika? Raha eny, ny akanjo fetibe izay atolotry ny Springfield anao ao amin'ny tonian-dahatsoratra vaovao Summer Sounds, dia mety ho safidy tsara hivezivezy malalaka sy milamina. Jereo ity fanangonana fetibe Springfield ity!
Ilay mpilalao sarimihetsika Begona Vargas ary ny vondrona Hinds dia mampindrana ny sariny amin'ity fanentanana orinasa vaovao ity izay ahitana akanjo vita pirinty, akanjo denim ary tampony crochet crochet. Akanjo maivana feno loko manasa anao hifalifaly.
Ny orinasa dia afaka namerina indray tamin'ity fanentanana ity Fihetseham-po amin'ny fahalalahana ary mahafinaritra ihany koa ny mifandray amin'ny fetiben'ny mozika. Nanao izany tamin'ny alàlan'ny scenario sy singa manokana toy ny akanjo: tanora, vaovao ary miaraka amin'ny hippie touch izay miasa foana amin'ireo tranga ireo.
Ny fanalahidin'ny Summer Sounds
Ny akanjo misy lamina Manana anjara toerana lehibe amin'ity fanangonana ity izy ireo. Manana vatana tantely izy ireo, tsipìka amin'ny andilany, ruffles amin'ny zipo ... antsipiriany izay manome azy ireo vaovao sy mihetsika. Ny fohy na midis dia mitambatra amin'ny kapa fisaka sy kiraro cowboy.
Crochet dia fanalahidy iray hafa amin'ity fanangonana fetibe Springfield ity. Ny tampony fehin-kibo, miaraka amin'ny vozony efamira sy voninkazo crochet amin'ny lokon'ny fonony, dia mety ho iray amin'ireo singa manintona indrindra amin'ity fanangonana ity, fa tsy ny iray ihany, satria hanana fotoana hanamarinana ianao.
Miaraka amin'ny tampon'ny crochet, ny tampon-boninkazo vita printy. Ireo dia mitambatra amin'ny akanjo denim: pataloha, zipo fohy ary short. Na dia azonao atao ihany koa ny miloka amin'ny set t-shirt na blouse sy vest. Ary ny akanjo miaraka amin'ny amboradara ara-poko dia iray amin'ireo soso-kevitr'i Springfield amin'ny fety manaraka.
Tianao ve ny soso-kevitra amin'ity fanangonana fetibe Springfield ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Summer Sounds, fanangonana festival Springfield
Ahoana no manao veloma amin'ny tarehy reraka